यस्ता व्यक्तिहरुले बिर्सेर पनि नखानुहोस् चुकन्दर !! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता व्यक्तिहरुले बिर्सेर पनि नखानुहोस् चुकन्दर !!
चुकन्दरको अत्यधिक सेवनले कलेजोलाई क्षती पुर्याउन सक्छ । चुकन्दरमा कपर, आइरन, फस्फोरस, म्याग्नेसियमको उच्च मात्रा हुन्छ । यो तपाईंका लागि फाइदाजनक त हुन्छ तर यसको अत्यधिक सेवनले यी सबै कुरा कलेजोमा गएर जम्मा हुन थाल्छन् । यसले कलेजोलाई क्षती पुर्याउँछ । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 32 = 42